METFP – FARMADA : hiara-hisalaha hanatsarana ny fiofanana arak’asa eo amin’ny lafiny fambolena sy ny fiompiana – METFP
METFP – FARMADA : hiara-hisalaha hanatsarana ny fiofanana arak’asa eo amin’ny lafiny fambolena sy ny fiompiana
Isan’ireo sehatr’asa antoky ny fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana, izay ahafahana rahateo miroso amin’ny fahaleovantena ara-tsakafo, araka ny vinan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika, Andry RAJOELINA. Hoenti-manatratra izany indrindra dia mila tanora matihanina sy ivontoeram-panofanana manaraka ny fenitra isika eto Madagasikara araka ny nohamafisin-dRamatoa Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, nandritry ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa eo amin’ny Minisiteran’ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa sy ny FARMADA tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina.
Hiara-misalaha amin’ny fanatrarana ny tanjona sy ho fanatanterahana ny politika ankapoben’ny fanjakana, eo amin’ny lafiny fanofanana ny roa tonta, ary hosinganina manokana manokana ny lafiny fiompiana sy ny fambolena ary ny fampiroborobona ny tontolo ambanivohitra.
Hifantoka amin’ny tanjona lehibe telo izao fifanaraham-piaraha-miasa izao:
i) fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpikambana ao anatin’ny FARMADA ;
ii) fampivoarana sy fametrahana ny « label SOA FAR » ;
iii) fanohanana ireo mpikambana ao anatin’ny tambajotra FARMADA, amin’ny firosoana amin’ny fanomezana fahefana an’asa (accréditation) ireo ivontoeram-panofanana.
Faritra folo (10) ivondronan’ireo ivontoeram-panofanana miankina sy tsy miankina misy ny tambajotra FARMADA no hisitraka izao paikady sy fiaraha-miasa izao : Analanjirofo, Atsinanana, Analamanga, Itasy, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe, Vatovavy Fitovinany, Menabe, Sofia ary Anosy.